नेपाल आज | के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर छ त ?
के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर छ त ?
काठमाडाैं । २ तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालमा किड्नी प्रतिस्थापन गराए लगत्तै उनले नेपालले सबै प्रकारका मेडिकल उपचार आफैं गर्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपाल चिकित्सा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएको संदेश दिन उनले नेपालमा आफ्नाे स्वास्थ्य उपचार गराए। याे प्रधानमन्त्रीकाे सकारात्मक कदम हाे तर नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र नीधिसहि विभिन्न सञ्चार माध्यमले कोभिड-१९ को संकटकाे बेलामा नेपाल र जनताको क्षमतालाई कमजोर पार्ने चिनियाँबाट सहयोग खाेज्नु लाेकतन्त्रलाइ धरापमा पार्ने काम भइरहेकाे बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भित्राभित्रै कोभिड-१९ बिरूद्ध लड्न चीनबाट सबै प्रकारको सहयोग खोजेर विश्वलाई के सन्देश दिन लागेका छन्। के नेपाल स्वास्थकर्मी, प्रशासन र राजनीतिक नेताहरू काेभिड-१९ बिरूद्ध लड्न असमर्थ छन्? चिनियाँहरूले नेपाललाई यसको समर्थनको सट्टामा धेरै चीजहरू लिन्छन्। यसका उदाहरणकाे रूपमा हामी चीनकाे ऋण नीतिलाइ नियाल्न सक्छाैँ, चीनले जुन जुन देशलाइ ऋण दिएकाे छ त्याे देश चीनले गलत काम गर्दा पनि बाेल्न सकेकाे छैन।
चिनियाँ सेना नेपाल आउने तयारीबारे भारतीय मिडियामा समाचार प्रकाशन भएसँगै राजनीतिक दल र संसदमा समेत यसबारे बहस सुरु भएको छ । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले मंगलबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सहयोगको वहानामा चिनियाँ सेना नेपालमा झार्ने तयारी भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले भने यसबारे अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । अर्कोतर्फ, भारत काेभिड-१९ को साथ आफ्नै लडाईमा रहेको छ र अन्य आवश्यक राष्ट्रहरूलाई पनि सहयोग गर्दै छ।